Mr Bullet - Spy Puzzles 1.5 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.5 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား ပေဟဠိ Mr Bullet - Spy Puzzles
Mr Bullet - Spy Puzzles ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်တစ်ဦးသူရဲကောင်း, သူလျှိုနှင့်ဒဏ္ဍာရီဖြစ်လာဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါသလား , စဉျးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းသင့်ရဲ့သေစေနိုင်သောတိကျမှန်ကန်မှုကိုချွတ်ပြပါနှင့်ရန်သူများကိုမှာရည်ရွယ်ထားယူပါ။ အဆိုပါပစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတွေ့ကြုံခံစားလာကြ။
ဒီထူးခြားတဲ့ပဟေဠိဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့ဦးနှောက်ကိုသုံးပါ။ သင်ကမ္ဘာပေါ်မှာကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ရန်သူများကို, နင်ဂျာနဲ့တခြားမကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေချယူတိကျသောရည်ရွယ်ချက်ခြင်းနှင့်လေဆာအာရုံစိုက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်! သစ်မြေများမှခရီးသွားဓားစာခံကယ်တင်, သင်၏ရန်သူတို့ကိုတိုက်ဖျက်ဖို့လက်ပစ်ဗုံး launchers နဲ့တူမတူထူးခြားလက်နက်များအသုံးပြုပါ။ သင့်ရဲ့စွန့်စားမှုယခု Start! သင်ကိုယ်တိုင်မေးရန်ရှိသည်တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်: သင်တဦးတည်းရိုက်ချက်၌ပွုနိုငျသနညျး
Mister Bullet လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုမစ်ရှင်သည်။ မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေစောင့်ရှောက်ရန်သင့်သေစေနိုင်သောတိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တိကျသုံးပါ! ဒါကြောင့်သူတို့ကတစ်ကမ္ဘာလုံးကိုယူရန်နှင့်တစ်ခုသာ MASTER သူတို့ကိုနှိမ့်ချယူနှင့်ကမ္ဘာကယျတငျနိုငျအားလုံးဒီမှာပါသူလျှိုတစ်ဦး, အေးဂျင့်, ဖုတ်ကောင်, lumberjack, ဂြိုလ်သားရှိမရှိ။
2. သော့ဖွ Epic မစ်ရှင်များ
သငျသညျ, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့လှည့်ကွက်နှင့်အတူအသီးအသီးကိုဆင်းယူဘို့ဤမျှလောက်များစွာသောရန်သူများကိုများနှင့်အဆင့်ဆင့်! သငျသညျကိုဘယ်လိုစမတ်ရှိပါသလဲ သငျသညျအပေါငျးတို့သပဟေဠိဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါသလား? , တုံ ricochet, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးဖြောင့်လိုင်းထဲမှာသွားကျည်ဆံတွေပစ်! အရာဝတ္ထုလဲကျပါစေနဲ့ပေါက်ကွဲရန်သင့်ကျည်ဆံတွေကိုအသုံးပြုပါ။ ကွင်းဆက်တုံ့ပြန်မှုကိုဖန်တီးပြုလုပ်သင့်ရဲ့ပစ်မှတ်ရဖို့ကြာဘာပဲလုပ်ပေး!
, ဓားစာခံကယ်တင်ဖို့လူတွေမှာလက်ပစ်ဗုံးပစ်နှင့်လျှို့ဝှက်စစ်ဆင်ရေးအပေါ်သွားပါ။ ရုံတိုင်းရိုက်ချက်ရေတွက်စေဖို့သတိရပါ, အခြေအနေကအရေးမရှိသေးပါ!
4. ရူပဗေဒ Puzzler ထိတွေ့ဆက်ဆံရတဲ့
အဆိုပါထူးချွန်ဆုံးနှင့်အမြန်ဆုံးသာလျှင်လူအပေါင်းတို့သည်ပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်နိုငျပါသညျ! သင်ကမှတဆင့်ဖြစ်စေမယ့်တိကျမှန်ကန်မှုထက်ပိုပြီးလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ အမြန်နှုန်း, အချိန်ကိုက်နှင့်သည်းခံခြင်းသင် zennest ပစ်ခတ်မှုမာစတာဖြစ်လာဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်ခပ်သိမ်းသောအရာဖြစ်ကြ၏။ သငျသညျတိုင်းအဆင့်တွင်ကြယ်သုံးပွရနိုင်သလား?
သူလျှို vs 5. သူလျှို
သင်အကောင်းဆုံးနှင့်အရှိဆုံးတိကျမှုရှိပါသလား အရူး PVP multiplayer ကးအခြားသူလျှိုစစ်တိုက်ခြင်း။
6. နယူးအပတ်စဉ် Features
မစ္စတာ Bullet အဆက်မပြတ်အသစ်ကထူးခြားတဲ့အဆင့်ဆင့်, လက်နက်နှင့်အခြားအရေခွံတွေနဲ့ update လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်အနေဖြင့်အရေးယူအပေါ်ထွက်လက်လွတ်ချင်မဟုတ်ပါပါလိမ့်မယ်။
သင်တစ်ဦးသေနတ်သမားတစ်ခုသို့မဟုတ် puzzler နေပဲဖြစ်ဖြစ်, မစ္စတာ Bullet သင်တို့အဘို့အဆင်သင့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်မှာလည်းမရှိကိုအကောင်းဆုံးရူပဗေဒသေနတ်သမားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသင်ယူရန်လွယ်ကူခြင်းနှင့်သခင်နီးပါးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းဂိမ်းကစားရန်လွယ်ကူသောအတူမှိုင်းအခိုက်လက်လွတ်ဘယ်တော့မှမ။ နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောလူကြမ်းအဖြစ်တိုက်ဖျက်။ တစ်ဒဏ္ဍာရီအေးဂျင့်ဖြစ်လာသည်။ သင့်ရဲ့မစ်ရှင် Start နဲ့ရိုက်ကူးရပ်တန့်ဘယ်တော့မှ! Bullseye!
မည်သည့်တုံ့ပြန်ချက်ရှိပါက https://lionstudios.cc/contact-us/ သွားရောက်လည်ပတ်တဲ့အဆင့်အထိရိုက်နှက်အပေါ်ကိုကူညီသို့မဟုတ်သင်ကစားပွဲများတွင်တွေ့မြင်ချင်ပါတယ်ဆိုကြောက်မက်ဘွယ်အတွေးအခေါ်များရှိထားဖို့လို!
သငျသညျမင်ျဂလာ Glass ကို, Flip Trickster နှင့် Love ဘောလုံးဆောင်ခဲ့သောစတူဒီယိုထဲကနေ!
မစ္စတာ Bullet နှင့်ခေါင်းစဉ်အနိုင်ရရှိမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြားဆုချီးမြှင့်အပေါ်သတင်းရရှိရန်နှင့် update လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုက်နာပါ;
Mr Bullet - Spy Puzzles အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Mr Bullet - Spy Puzzles အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Mr Bullet - Spy Puzzles အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Mr Bullet - Spy Puzzles အား အခ်က္ျပပါ
amirutoy စတိုး 74 270.17k
Mr Bullet - Spy Puzzles ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Mr Bullet - Spy Puzzles အခ်က္အလက္
ထုတ်လုပ်သူ Lion Studios
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://lionstudios.cc/privacy/
App Name: Mr Bullet - Spy Puzzles
Release date: 2019-07-22 12:22:20
လက်မှတ် SHA1: 57:B7:B8:4B:6E:8A:A1:7F:65:34:0E:0A:82:ED:63:49:D2:D9:B0:2B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Karang
နယ်မြေ (L): Semarang
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): Jawa Tengah
Mr Bullet - Spy Puzzles APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ